Pcb Assembly Mugadziri - Shenzhen KAISHENG pcb CO., LTD
Pcb Assebmly Mugadziri - PCBFuture
akadhindwa wedunhu bhodhi magungano, kumumvuri pcb gungano, Pcb gungano Mugadziri
PCBFuture inyanzvi pcb gungano mugadziri. Yedu fekitori ndeye yakanyanya hunyanzvi uye ine ruzivo pcb Kugadzira uye PCB Assembly Services muChina. Tinogona kupa Turnkey sevhisi kubva kuPCB yekugadzira kuenda kuPBB kuungana, kuyedza uye dzimba.
PCBFuture inopa PCBA musangano. Yedu nyanzvi SMT fekitori ine michina yemhando yepamusoro, senge yepasi-kirasi stencil kudhinda, SMT chip pick uye kuiswa, solder reflow, online kuyedzwa uye simbi mesh kugadzira. AOI bvunzo uye X-ray yekuyedza michina yekutarisa mhando.
Chii chinonzi prototype pcb-Assembly?
Prototype yakadhindwa wedunhu bhodhi (PCB) magungano ane mazita mazhinji. Mamwe mazita aunowanzonzwa ndeanoti: surface-mount technology (SMT) PCB prototypes, PCBA prototype assembly, PCB sample assembly, etc. Izwi rokuti prototype PCB Assembly rinoreva prototype inokurumidza PCBA inoshandiswa kuyedza mashandiro ezvigadzirwa zvemagetsi zvitsva. Izvi zvinobatsira nekuvimbiswa kwemhando yepamusoro, kuongorora kuti hapana dambudziko nechigadzirwa chechiedzo, kutsvaga bugs, uye kugadzirisa dhizaini. Kazhinji, pamberi pekugadzirwa kwemazhinji, imwe yemagetsi chirongwa chinoda 2-3 iterations ye prototype PCB gungano kuti ive nechokwadi chekuti zvese zviri kushanda nemazvo.
Nei uchisarudza PCBFuture yeiyo Pcb nhema uye gungano ?
Mafekitori maviri chaiwo muSenzhen.
Zvinhu zvinovimbika, chete kubva kune vanobvumidzwa zvikamu zvekuparadzira, semuenzaniso, Arrow, Remangwana zvemagetsi, Digi-kiyi, Mouser ...
Yakavimbika pcb shamwari, makore gumi nemashanu pcb kudyidzana, SGS ...
Yakavimbika standard standard Maitiro.
Imwe-yekumira sevhisi, pcb gadzira, pcb gungano, chinhu chinoitwa sourcing ...
PCBFuture inotsigira mainjiniya kuunganidza yavo yemagetsi prototype nekukurumidza uye mutengo zvinobudirira panguva yese dhizaini yekuongorora maitiro.
Hedu makuru masevhisi pcb gungano:
a. Cheki iyo solder paste
b. Cheki yezvikamu kusvika pa0201 "
c. Cheki yezvinhu zvisipo, zvinokanganisa, zvisiri izvo zvikamu, polarity
X-Ray inopa kuongororwa kwepamusoro kwe:
c. Chip chiyero mapakeji
d. Bare mabhodhi
Nemuchina wemagetsi wekushambadzira muchina, PCBFuture inowana unowirirana mhando uye maitiro ekudzora kana kuunganidza matunhu edunhu ane akawanda pasi uye magetsi materu, epamusoro-aripo macomputer, kana A-mhando chaiwo zvinhu. Ese maIOI anoedzwa pamberi peQC.
Ose dip-kupfeka uye akamira pfapfaidzo unhani inowanikwa. Kuchengetedza iyo isina kuitisa dielectric layer inoiswa pane yakadhindwa wedunhu bhodhi gungano kuchengetedza iyo yemagetsi gungano kubva kukuvara nekuda kwehutachiona, munyu pfapfaidzo, hunyoro, fungus, guruva uye ngura zvinokonzerwa nehutsinye kana hwakanyanya nharaunda. Mushure mekuisa iko kupfeka, zvinoonekwa zvakajeka sechinhu chakajeka uye chinopenya.
4.Surface Gomo Technology
Purojekiti zvigadzirwa zvese zvinoenderana neIPC2 zviyero. Nemakore 18 ezviitiko mukuisa BGA, UBGA, CSP uye madiki mapasipoti pasi kusvika uye kusanganisira 0201, isu tinopa inodhura-inoshanda, yepamusoro-goho mhinduro kune chero SMT zvinoda.
5.Pin Kuburikidza-gomba Gungano
Saizi yekuisa tepi uye tepi rolls. Iyo yakakwira saizi pcb ndeye 40 "x 40". Iyo yekumhanyisa kumhanyisa inosvika zviuru gumi nezvishanu paawa, uye iko kurongeka kunosvika 99%, izvo zvinoderedza kurasikirwa kwechinhu.
Pane mhinduro mbiri dzePCBFuture. Kutungamira-kwemahara uye inotungamira-iine soldering maitiro. Imwe neimwe mhinduro kamuri yakakamurwa kuita mbiri dzakazvimiririra nzvimbo. Saka hapana nyonganiso.
7.Complete bhokisi kuvaka
Mhinduro dzakakwana 'dzeBhokisi' dzinosanganisira manejimendi manejimendi yezvinhu zvese, zvemagetsi zvikamu, mapurasitiki, macasings uye zvinyorwa uye zvakapetwa.
Seye inotungamira mhando, PCBFuture iri kuenda kuzobata huru yemagariro mutoro uye mashandiro emishinari, kutora chikamu chakazara mumakwikwi epasi rese, uye shingairira kuve wepasi-kirasi pcb inogadzira.